အင်းတော်လေးအင်းလာ နိုင်ငံခြားသားများအား လှော်ခတ်ပြသရန် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည?? - Yangon Media Group
အင်းတော်လေးအင်းလာ နိုင်ငံခြားသားများအား လှော်ခတ်ပြသရန် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည??
အင်းတော်၊ အင်းတော်မြို့ရှိ အင်းတော်အင်း (အင်းတော်လေးအင်း)သို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည် များ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ရန် အင်းတော် လူငယ်ကွန်ရက်(CYAN)မှ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ် ရေသန့်ဘူးခွံနှင့် ဖော့များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် လှေငယ်တစ်စီးပြသ ထားရှိကြောင်း သိရသည်။
အင်းတော်မြို့ လူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲ့ (CYAN)မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းသည့်အနေဖြင့် မြို့တွင်းနေရာများ၌ သန့်ရှင်း ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ကြသလို လူငယ်များ လမ်းမှားမရောက်စေရန် မူးယစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေး အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အင်းတော်မြို့၏သင်္ကေတ အင်တော်အင်းသို့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များ လေ့လာရေးခရီးလာရောက်မှု ရှိသဖြင့် အင်းသန်းရှင်းရေးအတွက် ရေဝင် ရောက်သည့် ရေလမ်းကြောင်းများ သန့်ရှင်း ရေးကိုပါ ဆောက်ရွက်နေကြသည်။
ယခုအခါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်း သိမ်းသည့်အမြင်ဖြင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြစ် သည့် ရေသန့်ဘူးခွံဖော့ပုံးများကို အသုံးပြု ၍ လှေငယ်တစ်စီးပြုလုပ်ကာ အင်းသို့လာ ရောက်လေ့လာသူများအား ဗဟုသုတအဖြစ် ဖြန့်ဝေပေးသလို နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များ လာရောက်ချိန်တွင် အင်းအတွင်း လှော်ခတ် ပြသပေးသည်။
ကသာခရိုင်တွင် ကသာမြို့၌ အင်္ဂလိပ် ခေတ် လက်ကျန်အဆောက်အအုံများနှင့် နတ်ပေါက်ဆင်စခန်း အင်တော်မြို့နယ်၌ အင်း တော်လေးအင်း မော်လူးရွာ၌ White City ချင်းဒစ်စခန်းချရာနေရာ ဗန်းမောက်မြို့နယ်၌ စလုံတောင်နဘား၌ ကျေးလက်အခြေပြုခရီး သွားလုပ်ငန်း မန်လည်၌ မန်လည်ကျောင်းတော် ကြီးနှင့် ဆရာတော်ကြီး၏ြ<ွကင်းကျန်ရစ်သော ရုပ်ကလပ်တော်နှင့် ဒေသတွင်းကျေးရွာများ ၌ မြန်မာ့တူရိယာဗုံလုပ်ငန်း နှီးပလိုင်း နဘန်း ခြင်းတောင်း ဝါးခမောက် နှီးခမောက် ပရိ ဘောဂစသော လက်မှုလုပ်ငန်းများစွာရှိသည်။
ကသာဒေသ ခရီးသွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဒေသတွင်းမြို့ရွာများမှာ ရှေးဟောင်းအမွေ အနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း ပြန် လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း စသည်များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အင်းတော်မြို့ လူငယ်ကွန်ရက်အ ဖွဲ့မှာလည်း ဒေသတွင်း လာရောက်သူများ ကို ဆွဲဆောင်သည့်အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်အသုံးပြုပြသခြင်း ဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်လာစေရန် ရေသန့်ဘူးခွံ ဖော့ပြားများဖြင့် ပြုလုပ်ထား သည့်လှေအား အင်းအတွင်း လှော်ခတ်ပြသ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
YBS လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်ဖျက်ဆီးမှုနှင့် ဘူးလက်ဂျာနယ် အကြီးတန်း သတင်းထောက်(ဟောင်း) ထောင်ဒဏ်သုံး?
အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားကြားက အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ
ကိုင်းတောထဲတွင် ပုန်းခိုနေသည့် ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ ၁၂ ဦးကို မင်းဘူးတွင် ဖမ်းမိ